Dreame T20, nadiifiye gacmeed tayo sare leh oo tayo sare leh [Dib u eegis] | Warka Gadget
Dreame T20, nadiifiye gacmeed oo tayo sare leh iyo waxqabad [Falanqaynta]
Aalad kasta oo tignoolajiyadeed oo ujeeddadeedu tahay inay noloshaada u fududayso waa lagu soo dhawaynayaa Actualidad Gadget, oo si kale ma noqon karto nadiifiyaha vacuum ee gacanta lagu qaato, oo ah shey ka wareegaya aaladaha nadiifiyaha nadiifiyaha ah oo ay ugu wacan tahay shaqadeeda iyo faa'iidooyinkeeda wakhti kasta oo ka wanaagsan. waxay noqonayaan maxsuul rabitaan.
Nala soo ogow sida Dreame T20 u shaqeeyo iyo haddii ay runtii u qalanto marka loo eego kuwa xafiiltama ee lagu heli karo isla qiimaha.
1 Alaabta iyo naqshadeynta, astaanta guriga
3 Madax-bannaanida iyo qalabyada
4 Adeegso khibrad
Alaabta iyo naqshadeynta, astaanta guriga
Dreame waxay ogaatay sida loo kala sooco wax yar oo ka duwan hoggaamiyeyaasha kale ee qaybta iyada oo la siinayo naqshadeeda iyo qalabka ay doorato sida kuwa aan ku soo aragnay alaabooyin hore. Dreame T20 Tani ma noqon karto wax ka yar, nadiifiyaha vacuum ah oo lagu sameeyay dibadda caag dhalaalaya oo leh habab kala duwan oo cawl ah, halka qalabyada ay ka samaysan yihiin matt graphite caag cawl ah iyo biraha birta ah ee aluminium cas. Waxaas oo dhan waxay na siinayaan badeeco khafiif ah, oo aan ka badnayn 1,70 garaam.
Ku iibso qiimaha ugu fiican Amazon.
Wax-qabad iyo adkaysi badan, oo ka baxsan waxa lagu faani karo soo saaristeeda. Alaabtu waxay u muuqdaan kuwo si fiican la isugu geeyay, oo ku habboon Ogsoonow in aan dhabarka ku hayno muraayad LED ah oo na siinaysa macluumaad ku filan isticmaalkeeda, iyo sidoo kale badhanka maaraynta heerarka kala duwan ee tamarta iyo qufulka. si aysan ula falgalin shaashadda si aan ula kac ahayn. Nidaamka "ficil" ee nadiifiyaha faakuumka waa iyada oo la adeegsanayo kiciyeyaasha, oo ku yaala gacanta, sidaas darteed nadiifiyaha vacuum wuxuu shaqeyn doonaa oo kaliya marka aan riixno. In kasta oo isticmaaleyaasha qaarkood ay aad ugu dhib badan tahay, shakhsi ahaan waxaan ka door bidayaa kuwa shid / daminta sababtoo ah waxaan si fiican u maareyn karnaa awoodaha iyo gaar ahaan madax-bannaanida.
Qaar badan oo idinka mid ah waxa ay quseeyaan awoodda oo kaliya, markaa waxaanu muujin doonaa mid ka mid ah xogta ugu horeysa. Waa maxay Dreame waxay bixisaa sida "turbo mode" Waxaan heli doonaa ilaa 25.000 oo baaskal, tani aad ayay uga sarraysaa celceliska inta u dhaxaysa 17.000 iyo 22.000 ee nadiifiyeyaasha faakuumka ee kala duwan ee qiimahan inta badan bixiyaan. Dhanka kale, waxaan haynaa filter tayo sare leh, kaas oo sidoo kale caan ku ah nooca badeecada, haa, ma fududa in la beddelo ama la nadiifiyo sida ay u dhacdo noocyadii hore (iyo raqiis) ee nadiifiyeyaasha gacmaha ee Dreame , Waxaan qiyaasayaa taas si loo ilaaliyo qulqulka.
Sida deebaajiga, waxay bixisaa ilaa 600 millilitir, deebaaji oo, maadaama ay horeba u tahay astaanta astaanta, ayaa la furay iyadoo la riixayo badhanka oo kaliya oo na siinaya suurtogalnimada inaan si fudud u dhigno hadhaagii. Mid ka mid ah waxyaabaha aan sida ugu badan uga helo nadiifiyeyaasha vacuum-ka ee Dreame ayaa si sax ah u fududeynaya faaruqinta taangiyadaas iyo sidoo kale awooddooda, taas oo aan horeyba kuugu sheegay in ay wax yar ka sarreeyso xitaa waxa calaamadda lafteeda dammaanad qaaday.
Madax-bannaanida iyo qalabyada
Waxaan hadda kaala hadli doonaa wax ku saabsan baytarigiisa, waxaan haynaa 3.000 mAh wadarta taas oo lacag buuxda ay qaadan doonto ku dhawaad ​​​​saddex saacadood haddii aan isticmaalno dabeysha ku jirta xirmada, iyada oo aan loo eegin haddii aan isticmaalno saldhigga dallacaadda ama haddii kale. maaha. Shakhsi ahaan, waxaan had iyo jeer ku talinayaa in la diyaariyo saldhigga dallaca sababtoo ah waxay fududeyneysaa labadaba ficilka isku xirka iyo kaydinta qalabka aan la tirin karin ee ay leedahay. Isku soo wada duuboo waxay noo dammaanad qaadayaan 70 daqiiqo oo madaxbanaanida qaabka "eco", kaas oo si weyn hoos loogu dhigay qaabka "turbo". Si kastaba ha ahaatee, waxaan helnay natiijooyin aad ugu dhow madax-bannaanida ay damaanad qaaday Dreame.
Dhanka qalabka, waxa ku jira sanduuqa Dreame T20 waa shaki la'aan la yaab leh sababtoo ah bixinteeda ballaaran, waxa aan haysano oo dhan waa tan:
Tuubo bir ah oo dheeraad ah
burushka korka la qabsiga ee Smart
Salka dallacaadda oo ay ku jiraan boolal
Dhuunta saxda ah ee caatada ah
Dhuun saxan oo ballaaran
Tuubbada dabacsan ee geesaha
Shaki la'aan, waxba kama waayi doontid Dreame T20 sida qalab ahaan, Waxa aad uga dambeeya summadaha kale ee “dhamaadka sare” leh, kuwaas oo intooda badan leh qalab si gaar ah loo iibsado.
Inta lagu guda jiro isticmaalka maalinlaha ah dareenadayadu waxay ahaayeen kuwo wanaagsan, gaar ahaan qaylada, oo aan ka badnayn 73 decibels ee "turbo", guys Dreame waxay si fiican uga shaqeeyeen arrinta buuqa waxayna muujinaysaa, gaar ahaan haddii aan xisaabta ku darno Xaqiiqda ah in aysan waxyeello u geysan awoodda. Dhankeeda. In ay noo soo bandhigaan baytariyada la rari karo waa dammaanad, labadaba qaab beddelaad ah, iyo xaqiiqda ah inaan hagaajin karno iyaga oo aan u baahnayn inaan si buuxda u tuurno sheyga sababtoo ah qaar ka mid ah unugyada baytariyada lithium ayaa dhaawacmay.
Waxaan u xiisay in qalabka xaaqinka uu ku jiro xoogaa iftiin yar oo LED ah oo naga caawiya inaan si wanaagsan u helno wasakhda, haddii kale, Xaqiiqda ah in lagu daro burushka Adaptive Smart Waa lagama maarmaan kuwa naga mid ah ee haysta xayawaanka rabaayada ah maadaama ay naga caawinayso inaan timaha ka saarno fadhiga fadhiga iyo xitaa dharkayaga haddii aan rabno.
Marka la eego qalabka, Dreame T20 waa mid aad u dhameystiran, runtuna waxay tahay inaanan gabi ahaanba seegin wax, wax soo saar ficil ahaan wareegsan oo dhinacan ah. Dhankeeda. Nidaamka midabku waa mid xarrago leh oo ka sarreeya dhammaan waara.
Waxaan wajahaynaa badeeco inkastoo aysan raqiis ahayn, Waxay noqon doontaa qiyaastii 299 euro iyadoo kuxiran meesha iibka, waxay ina siinaysaa beddelaad aan dhammaad lahayn, Mid ka mid ah ismaamulada ugu fiican ee suuqa iyo dabcan dammaanadda Dreame, shirkad ruug-caddaa ah oo sumcad weyn ku leh qaybta. Dabcan ma aha "kala duwanaanta gelitaanka", laakiin kuwa cad in ay raadinayaan alaabta noocan oo kale ah waxay ka heli doonaan Dreame T20 xulafada aad u wanaagsan, waxaan ogaanay inay tahay badeecad wareegsan oo caddaalad ah waxaana rabnay inaan helno. ila wadaaga .
Qalab kala duwan oo ballaadhan
Aad ula mid ah noocyada kale ee Dreame
Wax LED ah oo xaaqinka ah ma leh
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » General » Reviews » Dreame T20, nadiifiye gacmeed oo tayo sare leh iyo waxqabad [Falanqaynta]
Black Friday: Waxa ugu fiican ee la soo bandhigo otomaatiga iyo codka guriga
Sifeeyaha Hawada Smartmi, nadiifiye aad u karti badan leh filtarrada H13